क्रूज छुट्टिहरु - सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य के हो? | निरपेक्ष यात्रा
सुसाना Godoy | | ग्रीस
यदि तपाइँ एक छेउमा राख्न को लागी विमान र कार वा ट्रेन, यात्रा को सबै भन्दा विशेष तरीका मध्ये एक मा शर्त जस्तै केहि गर्न चाहानुहुन्छ। क्रूज छुट्टी सधैं ती विचारहरु हो कि तपाइँ कम्तीमा एक पटक तपाइँको जीवन मा पूरा गर्न को लागी एक हो। यो एक रोमान्टिक यात्रा हुन सक्छ यदि तपाइँ रुचाउनुहुन्छ वा परिवार, प्रत्येक एक को आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ, तर दुबै अवस्थामा हाम्रो सपनाहरु को अपेक्षाहरु पूरा हुनेछन्। के तपाइँ उनीहरुलाई साँचो बनाउन मन पर्दैन?
यही कारण हो कि महामारी को यो सबै समय पछि, हामी शैली मा यात्रा को लागी फिर्ता मनाउनु पर्छ। होशियारी संग हो, तर ती सपनाहरु लाई पूरा गरीरहेछौं जुन हामीले उल्लेख गरेका छौं र जुन यति लामो समय सम्म लुकेको छ। हामी तपाइँ सबैलाई बताउँछौं यस्तो यात्रा को लाभ र मनपर्ने ठाउँहरु भ्रमण गर्न को लागी.
1 ग्रीस: मुख्य क्रूज गन्तव्यहरु मध्ये एक
2 किन एक क्रूज मा जानुहोस्?
3 क्रूज बिदा, कहिले बुक गर्ने?
4 मँ एक भूमध्य क्रूज के गर्न आवश्यक छ
ग्रीस: मुख्य क्रूज गन्तव्यहरु मध्ये एक
यद्यपि यो सत्य हो कि हामी क्रूज बिदा को रूप मा धेरै गन्तव्यहरु को बारे मा कुरा गर्न सक्छौं, ग्रीक टापुहरु महान मनपर्ने मध्ये एक हो। यो फरक पर्दैन यदि तपाइँ पहिले नै त्यो क्षेत्र मा हुनुभएको छ, किनकि यात्रा को यस साधन को लागी धन्यवाद, तपाइँ यसलाई एक धेरै विशेष तरीका मा पत्ता लगाउनुहुनेछ। भूमध्य सधैं खोज्न को लागी एक गहना हो र जस्तै, ग्रीस यसको उज्यालो ढु्गा हो।। को क्रूज ग्रीस यो सबैभन्दा छनौट मध्ये एक हो किनकि यस क्षेत्र एक अद्वितीय पुरातात्विक धन छ, यस प्रकार हामीलाई परिदृश्य छोडेर हाम्रो रेटिना मा चित्रित गरिनेछ।
तर उनको मात्र हैन एथेन्स र यसको एक्रोपोलिस मा रोक क्रीट बिर्सनु बिना, कुञ्जी बिन्दुहरु को अर्को हुनेछ, किनकि यो क्रूज जहाजहरु को लागी दुई बन्दरगाहहरु छन्। त्यहाँ तपाइँ Knossos को महल, जो पनी तपाइँ यसको अवशेष र हेलेनिक सभ्यताको एक प्रमुख बिन्दु संग आश्चर्यचकित हुनेछ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ पक्कै Mykonos यसको समुद्र तटहरु को लागी सुन्नुभएको छ। तेसैले, यो छनौट गरिएको वातावरण को अर्को हो जब तपाइँको यात्रा मा एक स्टप बनाउन। Santorini मा यसको प्रसिद्ध सूर्यास्त संग समापन। अब तपाइँ अलि बढी बुझ्नुहुनेछ किन ग्रीस र भूमध्यसागर मुख्य गन्तव्यहरु मध्ये एक हो!
किन एक क्रूज मा जानुहोस्?
जे होस् यो एक प्रश्न हो कि हामी जान्दछौं कि कसरी जवाफ दिने जस्तो लाग्छ, हामी तपाइँलाई तपाइँको आरक्षण गर्न को लागी केहि कारणहरु दिनेछौं। हामी स्पष्ट छौं कि क्रूज यसले हामीलाई स्थानहरुमा लैजान्छ जुन सँधै यातायात को अन्य साधनहरु द्वारा पहुँच गर्न सजिलो छैन। यही कारण हो कि केहि चीज हो कि तपाइँ एक नियमित आधार मा गर्दैन, तपाइँ यसलाई धेरै अधिक तीव्रता संग बाँच्न सक्नुहुन्छ। त्यही बाट सुरु हुन्छ यो एक बिल्कुल नवीन र रचनात्मक अनुभव हो, तपाइँसँग विभिन्न गतिविधिहरु गर्ने तर एकै ठाउँ छोडेर बिना विकल्प हुनेछ। किनभने डु boat्गा मा तपाइँ दिन को समय गतिविधिहरु, खेल, मनोरन्जन, आराम पूल समय र धेरै संग पाउनुहुनेछ। सबै कुरा तपाइँ तपाइँको बसाई रमाईलो को लागी डिजाइन गरीएको छ!
क्रूज बिदा, कहिले बुक गर्ने?
सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि, यसको नुन लायक कुनै यात्रा जस्तै, यो सबै भन्दा राम्रो छ सकेसम्म चाँडो आरक्षण गर्न को लागी। उन्नति धेरै राम्रो योजना बनाउन को लागी सबै कुरा हो। यदि तपाइँ थोरै बचत गर्न चाहानुहुन्छ, यो भन्दा राम्रो केहि छैन यो उच्च मौसम मा नगर्नु र सेप्टेम्बर सम्म पर्खेर यो खोज्न को लागी। यसको अतिरिक्त, केहि बिन्दुहरु को लागी तापमान कि तपाइँ भ्रमण गर्नुहुनेछ एक अधिक किफायती दायरा भित्र हुनेछ ताकि तपाइँ पूर्ण रूपमा प्रत्येक यात्रा को आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो साँचो हो कि वर्ष भर मा तपाइँ तपाइँको आरक्षण तपाइँको आवश्यकताहरु को आधार मा बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ एक परिवार को रूप मा यात्रा गर्न को लागी, तपाइँ अधिक ठाउँ को आवश्यकता छ र यो भन्दा राम्रो छ तपाइँ स्थानहरु को बाहिर दौडनु भन्दा पहिले प्राप्त गर्न को लागी। याद गर्नुहोस् कि त्यहाँ सधैं प्रस्तावहरु छन् कि तपाइँ एक राम्रो चुटकी बचाउन को लाभ लिन सक्नुहुन्छ।
मँ एक भूमध्य क्रूज के गर्न आवश्यक छ
एक पटक तपाइँ छनौट गर्नुभयो र तपाइँको यात्रा बुक गर्नुभयो र यसको साथ दिनहरु कि तपाइँ तपाइँको क्रूज छुट्टी मा बिताउन जाँदै हुनुहुन्छ, शंका उत्पन्न हुन्छ, किनकि तपाइँ यातायात को यस साधन मा यात्रा गर्नुभएको छैन। तर चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि यो अरुलाई थाहा छैन अरु भन्दा फरक केहि छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाइँ आराम गर्नुहुन्छ र आफैंलाई पूर्ण आनन्द लिनुहोस् किनकि डु boat्गामा तपाइँलाई यसको लागी चाहिने सबै चीज छ। यद्यपि यो सत्य हो कि पुरानो तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ कपडा दुबै दिन को समयमा आरामदायक हुन को लागी र रात को लागी एक सानो औपचारिक छ। यो बोर्ड मा हुनको लागी हो।
तर जब हामी रोक्छौं कि हामी रमाईलो गर्न चाहान्छौं, यो उचित छ कि तपाइँ तपाइँको सबैभन्दा आरामदायक र आकस्मिक शैली बाहिर लिनुहोस्। तसर्थ, हामी सधैं उपयुक्त जुत्ता लगाउनु पर्छ र कपडा पनि उपयुक्त छ। भ्रमण को यस प्रकार को लागी, सधैं आधारभूत चीजहरु संग एक सानो झोला बोक्न सम्झना, प्लस पानी र सूर्य संरक्षण को एक बोतल। दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि ठाउँहरु मा तपाइँ भ्रमण गर्नुहुनेछ, उनीहरु कपडा संग प्रवेश को अनुमति दिदैनन् कि धेरै छोटो छन् र यो केहि खाता मा लिन को लागी हो। पक्कै अब तपाइँ तपाइँको गन्तव्य को बारे मा स्पष्ट हुनुहुनेछ, तपाइँको यातायात को साधन र तपाइँको महान छुट्टिहरु कि तपाइँ को लागी पर्खिरहेका छन्!
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » क्रूज बिदा: तपाइँको सबै सपना साकार पार्नुहोस्!